व्यवसायी लागि व्यापार नेटवर्क
मा छन् 400 व्यवसायी लाखौं
हामी तिनीहरूलाई लिंक गर्न सक्छन् भने कल्पना गर्नुहोस्.
आफ्नो कम्पनी विज्ञापन, स्थानीय र ग्लोबली
व्यापार नेटवर्क मा आफ्नो स्वतन्त्र विज्ञापन सिर्जना IEAGE.
नयाँ भागीदार खोज्नुहोस्
व्यापार अवसरहरू सिर्जना गर्न फोरम सहभागी.
IEAGE समाचार & इनसाइट्स
व्यापार नेटवर्क को उद्यमी लागि परिणाम
व्यवसाय नेटवर्क IEAGE यो एक उद्यमशीलता वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ, व्यापार खुलासा र बिक्री मा तेजी. नयाँ ग्राहकहरु पत्ता, नयाँ व्यवसाय विकास, डिजिटल संसारमा उतरदायित्व लिनु, इन्टरनेट मा पोस्ट अनुमति, नयाँ च्यानल बनाउन र नयाँ अवसर प्रदान, को व्यवसायी लागि व्यापार नेटवर्क को उद्देश्य हो IEAGE.
उद्यमी जारी आफ्नो उत्पादन वा सेवा छ, मुक्त, कुनै शुल्क, स्थानीय रूपमा, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी (व्यापार निर्देशिका).
नयाँ ग्राहकहरु र साझेदार विकास (फोरम मा सहयोग), बस आफ्नो व्यवसाय विस्तार.
संगठन अनुकूलन, मुनाफा र रणनीति (पाठ्यक्रम मा नयाँ ज्ञान र सीप सिक्न).
क्षेत्रीय आर्थिक संकटले मुक्त बनें. (आपूर्तिकर्ता र ग्राहकहरु सम्पर्क नेटवर्क को निर्माण संग).
व्यापार नेटवर्क र व्यापार निर्देशिका, समय संग, उद्यमीहरू लागि एक आर्थिक र सामाजिक वातावरण बनाउन र उद्यमीहरू विकास, साँच्चै सन्तुलित र जिम्मेवार, काम मा जग, टीम, सहयोग र संचार.
यो विज्ञापन र वैश्विक नेटवर्क भाग लिन आवश्यक छ, एक इन्टरनेट. विश्व जोडिएको छ, र उद्यमी, कहीं दुनिया मा देखि, तपाईं र उत्पादनहरु र सेवाहरु विज्ञापन गर्न मौका हुनु पर्छ गर्नुपर्छ, विश्वव्यापी. यो व्यवसाय नेटवर्क, के IEAGE, यो समारोह छ.
यो IEAGE उद्यमीहरू नेटवर्क भाग र नयाँ अवसर सिर्जना गर्न र व्यवस्थापन सुधार गर्न अनुमति दिन्छ, व्यवसाय निर्देशिका माध्यम, प्रत्येक क्षेत्रमा फोरम, एकेडेमी IEAGE ज्ञान र उद्यमशीलता पाठ्यक्रम भेटी.
यो उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र IEAGE परिसर रूपमा छ:
उद्यमी बीच एक व्यापार वातावरण सिर्जना;
उत्पादन बनाउन र सेवाहरू नजिकैको सहर र दुनिया भर चिनिन्छन्;
धेरै भाषामा संवाद गर्न सक्षम (अर्को भाषामा भाषा र पठनीयता मा लेख्न);
होइन ठूलो बिक्री लागि (साना उद्यमी लागि एक जोखिम हो: नगद प्रवाह को कमी, उत्पादन क्षमता र राजस्व स्रोत निर्भर);
यो बेहतर दर्जनौं छ, साना बिक्री र साझेदारी सयौं, एक ग्राहक वा साथी मा भरोसा देखि (जोखिम कम);
बढावा र व्यवस्थापन कसरी ज्ञान प्रदान र आफ्नो व्यापार बढन, व्यावहारिक आवेदन चौरमा, दक्षता र प्रभावकारिताको, र यसको पहिलो वर्ष सञ्चालनको मा नयाँ व्यापार को समापन मा कमी. यो सम्भव बनाउन, दोस्रो चरण मा, विस्तार, दिगो, योजना र संगठित, व्यापार नै;
सहायता क्षेत्रहरु (र उनीहरूको समुदायमा) गरीब आफ्ना उत्पादनहरू प्रवर्धन र विकसित राष्ट्रहरूमा आफ्नो विपणन को सुविधा.
मा चलो र हजारौं को जीवनमा ठूलो फरक बनाउन हुनेछ भन्ने ठूलो entrepreneurial वातावरण बनाउन मदत, भन्दा बढी लागि खाता भनेर लाख साना र मध्यम आकारको उद्यम 50% वैश्विक emprego गर्छन्. गरेको एक राम्रो संसारमा बनाउन गरौं, सबै लागि बराबर!
← IEAGE समाचार & इनसाइट्स
व्यापार पर्यावरण र ज्ञान →